Western Norway (Norwegian: Vestlandet, Vest-Norge, Vest-Noreg) waa gobolka ku yaal xeebta Atlantic ee koonfurta Norway. Waxay ka kooban tahay gobollada Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, iyo Møre og Romsdal. Gobolka waxaa ku nool qiyaastii 1.3 milyan oo qof. Magaalada ugu weyn waa Bergen iyo kan labaad ee ugu weyn waa Stavanger. Taariikh ahaan gobollada Agder, Vest-Telemark, Hallingdal, Valdres iyo qaybaha woqooyiga ee Gudbrandsdal ayaa lagu daray Galbeedka Norway.  
Bergen, Stavanger, Molde, Hermansverk
Muujinta khaladaadka: Astaamaha shaqaaleenta ee aan la aqoonin "[".00
Galbeedka Norway, iyo qaybo kale oo ka mid ah gobollada taariikhiga ah ee Norway, waxay wadaagaan taariikhda guud ee Danmark, Faroe Islands iyo Iceland iyo in ka yaryar Nederland iyo Ingiriiska. Tusaale ahaan, faras Iceland waa qaraabo u dhow Fjord, luuqadaha Faroese iyo Icelandiga waxay ku saleysan yihiin lahjadaha Galbeedka Norwey.
Waqtigii hore ee Norse, dadka reer Galbeedka Norway waxay degganaayeen Galbeedka Islii ee Waqooyiga Atlantik, si ay Orkney, Shetland, Faroe Islands iyo Iceland. Intii lagu guda jiray da 'yarta Viking waxaa lagu sameeyey Hebrides, Man iyo Ireland si sax ah.
Waqtiga ugu horreeya ee casriga ah, Galbeedka Norway waxay haajir badan ku qaadatay Maraykanka, Kanada, iyo in ay ka yartahay qiyaasta Ingiriiska. Tani waxay khuseysaa gaar ahaan Mareykanka Mareykanka ee Minnesota, waqooyiga iyo koonfurta Dakota, Wisconsin, Montana, iyo gobolka Canadian ee Manitoba. Icelandic iyo Faroese, iyo dad badan oo ku nool Islaaxyada Ingiriiska, waxay ka soo farcameen Norsemen iyo Vikings kuwaas oo ka soo haajiray Galbeedka Norway xilligii Viking Age. Dhanka kale kumanaan reer galbeedka ah ayaa ka soo farcamay ganacsatada Holland iyo jarmalka kuwaas oo yimid 16-iyo qarnigii 17-aad, gaar ahaan Bergen.
Galbeedka Norway waxay leedahay heerka ugu hooseeya ee shaqo la'aanta, heerka dambiyada ugu hooseeya, qaybta ugu yar ee dadweynaha, dadka ugu yar ee ku nool daryeelka iyo dhaqaalaha ugu fiican dalka. Waxaa guud ahaan loo tixgeliyaa gobolka ugu awoodda badan Norway. 
Vestlandet sidoo kale waa magaca loo doorto gobolka mustaqbalka ee ka kooban laba ka mid ah afarta gobol ee degmooyinka, viz. Hordaland iyo Sogn og Fjordane.  Labada gobol ayaa dib loo furfuri doonaa kadib markii la kala qaybiyay 1763 (kadibna loo yaqaan Søndre Bergenhus iyo Nordre Bergenhus).
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Western_Norway&oldid=187438"
Last edited on 13 Diseembar 2018, at 16:13
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Diseembar 2018, marka ee eheed 16:13.